Miyir-beelka bani-aadmigu wuxuu ina barayaa in dhaqanka Afrika ee Kongo uu ku kobcinayo qorshooyinka kala duwan ee 3 isla markaa:
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 3, 2018 00: 20 No Comments
1. Diyaarada jirka, sheyga ama dhulka;
2. Dareen ahaan (dareenka, dareenka) ama Astral;
3. Diyaaradda fikirka (Derjada) ama maskax ahaan.
Diyaarada jirka ayaa ah kan ugu dambeeya ee hoggaanka sare ee miyir-beelka. Taas macnaheedu waa inay tahay saadaalinta diyaaradaha sareeya. Si aad u sameyso wax yar, waxaan dhihi doonaa tan: isbeddelka qofka aadanaha waa inuu ku bilaabmaa maskaxda (Derjada) taas micnaheedu waa diyaaradda fikirka, iyada oo gacanta ku haysa fekerkiisa, iyo kala sooc, dib u cusbooneysiin iyo amar.
Qorshahan weyn ee maskaxda ayaa wax ka beddeli doonta dareenka, dareemayaasha ama dusha masaafada ee la xiriira qorshaha Karmic dSoo jiidashada iyo diyaaradani waxay si otomaatig ah u beddeli doontaa diyaaradda jirka ee arrinta aan ku aragno indhahayaga hortooda.
Dadka qaar ma fahmaan sababta noloshoodu aysan u kobcin, waa sababta oo ah waxay u maleynayaan in wax kasta oo ku dhaca iyaga inay ka yimaadaan diyaaradda arrimaha jirka oo aysan ka warqabin jiritaankooda diyaaradda fikirka. iyo shucuuro ka abuurma dhamaan abuurista koonteennaheena maxalliga ah oo ka soo saarta ilaha laga helo.